Mampitony ireo fanaintainana
Miankina amin’ny vehivavy tsirairay no hahazoana fahafinaretana na tsia mandritra ny firaisana ara-nofo rehefa tonga ny fotoana. Misy ireo milaza fa mahazo fahafinaretana kokoa amin’io fotoana io, satria mitony ireo fanaintanana ateraky ny fadimbolana, rehefa miray ara-nofo. Ny tena marina anefa dia ny saina no mahatonga an’io eritreritra io.
Inona avy ireo fiantraikan’ny fanaovana firaisana ara-nofo rehefa fadimbolana?
· Tsy dia misy fiantraikany mivantana saingy mora mifindra kokoa ireo mikraoba, otrikaretina.
· Mora mitombo be ihany koa ireo otrikaretina.
· Mety ho bevohoka ihany koa anefa, indrindra raha tena vetivety ny tsingerim-bolan’ilay vehivavy ka akaiky be ny fotoana maha-lonaka. Mitombina ihany koa moa ny vohoka raha toa ka nanadino fanafody fanabeazana aizana, raha mpinana izany.
Inona no fiarovana tena tsara indrindra?
Aleo mampiasa fimailo foana. Io ihany no antoka sady miaro ny otrikaretina tsy hifindra no miaro amin’ny vohoka tsy niriana, raha ohatra ka tena tsy mahatana mihitsy mandritra ny fadim-bolana ny mpivady.